ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးရှိ အခြေခံပညာကျောင်း တစ်ရာကျော်တွင် ငလျင်အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးလု? - Yangon Media Group
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးရှိ အခြေခံပညာကျောင်း တစ်ရာကျော်တွင် ငလျင်အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးလု?
လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်း အမှာစကားပြောကြားနေစဉ်။(ဓာတ်ပုံ-Yangon Region Government)
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၁ဝ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်းတစ်ရာကျော်တွင် ငလျင်အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းက ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ ၁ဝ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ အ.ထ.က(၁) မရမ်း ကုန်းတွင်ပြုလုပ်သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းများတွင် ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆောင်ရွက်သူများအတွက် နည်းပြသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးနိုင်ငံလင်းက”ဒီနေ့ပွဲကတော့ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုဖြင့် UNDP နဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ငလျင်ဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာနည်းပြသင်တန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းက ခရိုင်လေးခုမှာ ခရိုင်တစ်ခုလျှင် စာသင်ကျောင်း ၂၅ ကျောင်း ခရိုင်လေးခုအတွက် စာသင်ကျောင်းတစ်ရာကျော်ကို ငလျင်အသိပညာပေး ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခရိုင်လေးခုမှ ခရိုင်တစ်ခုလျှင် ဆရာ/ဆရာမနည်းပြ ရှစ်ဦးစီဖြင့် ၃၂ ဦး အပါအဝင် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခွဲမှု ဦးစီးဌာနမှရှစ်ဦး စုစုပေါင်း ၄ဝ ဦးကိုသင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
ဦးနိုင်ငံလင်းက ”ငလျင်လှုပ်မယ့်အချိန်ကို အားလုံးကခန့်မှန်းနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ နေ့လှုပ်မလား၊ ညလှုပ်မလားခန့်မှန်းနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ ကလေးသူငယ်များ တစ်နေ့တာအချိန်မှာ စာသင်ကျောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ အချိန်ကပိုပြီးများတဲ့အတွက် ဂရုစိုက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကလေးတွေ ကျောင်းတက်ချိန်မှာ ငလျင်လှုပ်ခဲ့လို့ရှိရင် ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုနေရာမျိုးကဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့ ဘယ်လိုနေရာမျိုးက အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိဖို့ လိုအပ်သလို ဘေးကင်းတဲ့နေရာကို ဘယ်လမ်းကြောင်းကနေသွားရမယ်ဆိုတာကိုလည်း သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်”ဟု ဆက်လက်ပြောသည်။
ငလျင်ဆိုင်ရာအသိပညာပေး လုပ်ငန်းများကို အခြေခံပညာ ၁ဝ၇ ကျောင်းတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တောင်ပိုင်းခရိုင်ပညာရေးမှူးဦးဘသန်းက”ဒါကတော့ ခရိုင်တစ်ခရိုင်က ရှစ်ဦးစီပေါ့။ သူတို့တွေက ဒီမှာနည်းပြသင်တန်းကရလာတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ကိုယ့်ခရိုင်အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ ရှင်းလင်းပြီးတော့ပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်တာကောင်းပါတယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေက ခဏခဏဖြစ်နေတာလေ။ ဒါတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်အောင်လို့ ဒီလိုမျိုးသင်တန်းတွေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းအားလုံးပါပါတယ်။ ကျောင်းတွေမှာတော့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သီးခြားဟောပြောပွဲတွေလည်း ခဏခဏလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျောင်းတွေမှာ ဒီလိုလုပ်တာကောင်းပါတယ်။ အခြေခံပညာကျောင်းတိုင်းကို ပိုပြီးတော့လုပ်နိုင်ရင်ပို ကောင်းတာပေါ့”ဟုပြောသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးနှင့်တုံ့ပြန်ရေး စီမံချက်ကိုလည်း ရေးဆွဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ကျောက်ဆည် ဆင်လှူပွဲတော် နီးလာ၍ အထိမ်းအမှတ် ဆင်အရုပ်ငယ်များ စတင်ရောင်းချ
''ဟာသဇာတ်ကား ရိုက်ကူးမှုကို နည်းနည်း လျှော့သွားမယ်'' မြင့်မြတ်
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ရေ ရှားပါးဒေသများတွင် ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် တည??